Hevitra MPANOHARIANA | 3
Voajoko ny ramatahoran'ny mpijoko?
2021-06-09 @ 21:32 in Ankapobeny
Dia mitohy hatrany ny tantarantsika [video]. Eo amin'ny politika tsy misy izany kisendrasendra izany. Henjana ny katro-doha amin'ny fanaovana fanorona ary ao anatin'ny fanorona politika tsara ny toe-javatra tahaka itony.
Aza terena aho hino fa kisendrasendra izany fiaran'ny ambasadaoron'ny Soisa tao aorian'ny fiaran-dRavalomanana izany. Tsy nahomby indray ve ilay "fampitandremana farany" amin'ilay hafatra "subliminal"? Naninona no noesorina ireo zandary natao fampitahorana teo amin'ny vavahadin'ny Filoha teo aloha?
Lesona inona no raisina eny an-tsena?
2021-06-03 @ 18:30 in Politika
Maka ny fon'ny olona eny an-tsena ny filoha teo aloha Ravalomanana. Amin'ny maha-politisiana azy dia mibaribary izany fa tsy misy afenina.
Azo heverina fa nisy ny naka tahaka saingy tsy nahazo olona araka izay noheverina, tsy nisy olona niraharaha akory aza. Misy lesona azo tsoahina amin'izany ve?
Misy antony matoa zavatra toy izany dia miteraka lohateny goavana ho an'ny gazety mpanohana ny fitondrana. Mbola tarafina hatrany izay ataon'ilay filoha teo aloha.
Mbola sahirana mitady vola ny olona fa mba manararaotra minitra vitsy ho fomba hanehoana izay any anaty any koa.
Fanambaran'ny mpanao gazety nahaisotra mpiasam-panjakana ambony ve?
2021-06-02 @ 21:52 in Ankapobeny
Olana iray manokana eto Madagasikara ny famehezana ny olona tsy hamoaka zava-tsy mety ataon'ny mpitandro ny filaminana indrindra eo amin'ny lazaina ho eo am-panaovana ny asany. Tranga iray ny teny Itaosy tamin'ny asabotsy raha hita nikirazorazo ambony hazo ny paty natsipitsipy.
Misy ny holafitra ary misy ny sendika, tsy mifanitsaka ve ny asan'ireo fikambanana ireo?
Ny vaovao hafa malaza moa dia ny fiovan'ny talen'ny seraseran'ny prezidansa. Lasa vehivavy misolo vehivavy moa ilay izy raha voamarina ny hisolo azy.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 162 163 164 Manaraka»